laxmi equity fund(laxmi equity fund) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आजसम्म कायम इकाइधनीले लक्ष्मी इक्विटी फन्डको ३५% नगद लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी इक्विटी फन्डको ३५ प्रतिशत नगद लाभांश सुरक्षित गर्ने आज साउन १४ गते अन्तिम मौका रहेको छ। नगद लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले भोलि साउन १५ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको आज साउन १४ गतेसम्म कायम इकाइधनीले यो...
लक्ष्मी उन्नति कोष र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको आय बढ्यो, न्याभ कति ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी उन्नति कोषको प्रतिइकाइ खुद मूल्य (न्याभ) असार महिनामा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यो कोषको न्याभ बढेर १४.९२ रुपैयाँ पुगेको हो। गत जेठमा न्याभ १४.१७ रुपैयाँ रहेको थियो। आज सार्वजनिक असार महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार यो कोषअन्तर्गत सूचीकृत सेयरमा...
कहिलेसम्म कायम इकाइधनीहरुले लक्ष्मी इक्विटी फन्डको ३५% नगद लाभांश पाउने ?
काठमाडौ । लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी इक्विटी फन्डले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि इकाइधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी घोषणा गरेको नगद लाभांश प्रयोजनार्थ बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ। योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले यो फन्डको नगद लाभांश प्रयोजनार्थ यही साउन १५ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने...
लक्ष्मी इक्विटी फन्डले इकाइधनीहरुलाई ३५% नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौ । लक्ष्मी म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी इक्विटी फन्डले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि इकाइधनीहरुलाई ३५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको आज बिहान बसेको बैठकले लक्ष्मी इक्विटी फन्डका इकाइधनीहरुलाई गत आर्थिक वर्षका लागि ३५...
लक्ष्मी इक्विटी फन्डद्वारा बुक क्लोजको मिति तय, कहिलेसम्मका इकाइधनीले पाउँछन् प्रतिफल ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी इक्विटी फन्डले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का घोषित प्रतिफल वितरण प्रयोजनार्थ बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ। लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित यो इक्विटी फन्डले यही भदौ २३ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको अर्थ भदौ २२ गतेसम्म कायम इकाइधनीहरु पनि यो फन्डद्वारा घोषित प्रतिफल प्राप्त गर्न योग्य हुने...
लक्ष्मी इक्विटी फन्डका इकाइधनीहरुका लागि लाभांश प्रस्ताव
काठमाण्डौ । लक्ष्मी म्युचुअल फन्डद्वारा लक्ष्मी इक्विटी फन्डले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। फन्ड सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। फन्डले यस योजनाका इकाइधनीहरुलाई ४.२५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको प्रवद्र्धन र लक्ष्मी...
लक्ष्मीका दुवै म्युचुअल फण्ड उच्च घाटामा, न्याभमा मिश्रित प्रदर्शन
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा गिरावटको मार एकपछि अर्को गर्दै म्युचुअल फण्डहरुले व्यहोरिरहेका छन् । अधिकांश म्युचुअल फण्डहरुको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य(न्याभ) घटिरहेको छ । यही क्रममा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले व्यवस्थापन गरेका २ म्युचुअल फण्डमध्ये एउटाको न्याभ घटेको छ भने अर्को स्किमको सामान्य बढेको छ । लक्ष्मी भ्यालू फण्ड-१ को...
लक्ष्मीका दुवै म्युचुअल फण्ड कमजोर बन्दै, घाटा बढ्दै
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा लगातारको गिरावटको मार म्युुचुुअल फण्डहरुको प्रदर्शनमा परेको छ । बजारमा गिरावटको प्रभाव लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमीटेडका दुवै म्युुचुुअल फण्डहरुमा परेको देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म दुवै स्किमहरु घाटामा गएका छन् । यो अवधिमा लक्ष्मी भ्यालूू फण्ड १ को प्रति इकाई खूद मूल्य घटेर ११ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम भएको...
घट्दो बजारको प्रभाव : धमाधम घाटा व्यहोर्दै म्युचुअल फण्ड !
काठमाण्डौ । सेयर बजारको निरन्तर गिरावटको प्रभाव विभिन्न मर्चेन्ट बैंकको व्यवस्थापनमा संचालित म्युुचुुअल फण्डहरुमा समेत देखिएको छ । भदौ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका तीन म्युचुुअल फण्डको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य(न्याभ)मा बजार गिरावटको असर देखिएको हो । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमीटेडले प्रवद्र्धन गरेको ५ वर्षे...
दयनीय बन्दै लक्ष्मीका दुवै म्युचुअल फण्ड
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडको सहायक कम्पनी लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमीटेडको प्रवद्र्धनमा संचालित दुुई म्युुचुुअल फण्डमध्ये एउटाको प्रति इकाई खूद मूल्य घटेको छ भने अर्काको बढेको छ । तर, दुवै स्किमको अवस्था सन्तोषजनक देखिदैन । लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-१ को प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य घटेको हो । असार मसान्तसम्म १३.९८ रुपैयाँ...
अन्ततः लक्ष्मी इक्वीटी फण्डमा मागभन्दा बढी आवेदन
काठमाण्डौ । अन्तिम दिनमा आएर आवेदनको ओइरो लागेपछि लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमीटेडले प्रवद्र्धन गरेको दोश्रो म्युचुुअल फण्ड लक्ष्मी इक्वीटी फण्डमा माग गरेभन्दा बढी आवेदन परेको छ । तेश्रो दिनसम्म लाजमर्दो अवस्था रहेको यो स्किममा अन्तिम दिनसम्म भने केही बढी आवेदन परेको हो । लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १० करोड...
लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको यति हरिबिजोग किन ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी इक्वीटी फण्डमा तेश्रो दिनसम्म आवेदनको संख्या केही बढेको छ । तर आवेदन दिने समय २ दिन बाँकी रहँदा समेत यो म्युचुुअल फण्डमा माग अनुसारको आवेदन अझै परेको छैन । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमीटेडले प्रवद्र्धन गरेको दोश्रो म्युचुुअल फण्ड लक्ष्मी इक्वीटी फण्डले १० रुपैयाँ प्रति इकाई मूल्यको कुल १० करोड इकाई निश्कासन...
लगानीकर्तालाई किन लोभ्याउन सकेन लक्ष्मी इक्वीटीले ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमीटेडले प्रवद्र्धन गरेको दोश्रो म्युचुअल फण्ड लक्ष्मी इक्वीटी फण्डमा लगानीकर्ताहरुले उत्साहजनक ढंगले आवेदन नदिने संकेत देखिएको छ । १ अर्ब मूल्यको १० करोड इकाईमा आवेदन मागिएकोमा पहिलो दिन शुक्रबार अत्यन्त न्यून आवेदन परेको हो । आवेदन पर्ने समय अझै बाँकी रहेकोले यसैलाई निश्कर्ष भने मान्न...
आजदेखि म्युचुअल फण्डको १० करोड इकाईको बिक्री खुल्ला(आवेदन केन्द्रको सूचिसहित)
काठमाण्डौ । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमीटेडको प्रबन्धन र लक्ष्मी बैंकको प्रायोजनमा संचालनको अनुमति पाएको लक्ष्मी इक्वीटी फण्डले आज(बैशाख २२ गते)देखि १० रुपैयाँ प्रति इकाई मूल्यको कुल १० करोड इकाईको सार्वजनिक निश्कासन गर्दैछ । लक्ष्मी क्यापिटल लिमीटेडको यो दोश्रो म्युुचुुअल फण्ड हो । कुल १ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको सार्वजनिक...